Kaam Ganacsiyeed Cusub oo loogu talagalay Aasaasayaasha Apple Apple iyo horumariyeyaasha | Waxaan ka socdaa mac
Kaam Ganacsiyeed Cusub oo loogu talagalay Aasaasayaasha Apple Apple iyo Soosaarayaasha
Iyada oo qayb ka ah ballanqaadka joogtada ah ee Apple ee ku aaddan xoojinta bulshada Madow iyo ka saarista caqabadaha fursadaha loo siman yahay, Kaamka Ganacsi ee loogu talagalay Aasaasayaasha Madow iyo Horumarinta. Daabacaaddan daah-furka ah, ayaa lagu soo dhoweynayaa kooxaha ka socda 13 shirkadood oo codsiyo ah. Barnaamijka Sinaanta iyo Cadaaladda, Apple waxay siiwadeysaa shaqadeeda si kor loogu qaado loona gaaro sinnaanta dadka isla'eg.
2019, Apple waxay qabatay shaybaarkii ugu horreeyay ee tiknoolajiyadeed. Waxaa loogu talagalay shirkadaha ku shaqeeya barnaamijka ee ay aasaaseen ayna maamulaan haween aasaasayaal ah iyo horumariyayaal. Kaqeybgalayaasha barnaamijka waxay xaqiijiyeen wareegyo maaliyadeed oo muhiim ah. Iyaguna way heleen abaalmarino badan iyo abaalmarino oo waxay si weyn u ballaariyeen labadaba kooxahooda iyo adeegsadayaasha dalalkooda adduunka.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay in la siiyo fursad si ay horumariyayaashu ugu qaataan khibrada ay hadda u leeyihiin dalabkooda heerka ugu sarreeya iyaga oo si fiican u bartay xirfado farsamo oo cusub. Maxaa intaa ka badan, Shirkadaha Apple waxay la shaqeeyaan Harlem Capital. Shirkad maal-gashan oo xarun ku leh New York oo maal-gashaday aasaasayaal kala duwan. Ujeeddadeedu waa in la siiyo hagitaan iyo hagitaan ka qaybgalayaasha.
Lisa Jackson, Madaxweyne ku xigeenka Apple ee Deegaanka, Siyaasada iyo Hindisaha Bulshada, oo hogaamisa REJI, ayaa ku dhawaaqay:
Kuwani abuurayaasha barnaamijyada cajiibka ah iyo hogaamiyaasha ganacsiga ku muuji ruuxa ganacsi taasi waxay si qoto dheer ugu socotaa bulshada madow. Shaqadoodu mar hore waxay muujineysaa awoodda koodh si loo dhiso adduun ka wanaagsan, waana sharaf in aan taageerno maadaama ay jareen waddo aan ognahay in kuwa badani ay raaci doonaan.
Haddii aad rabto inaad la kulanto kuwa horumarineed ee qayb ka noqon doona daabacaddan koowaad, waa inaad ku joojiso bogga rasmiga ah ee Apple u sameysay munaasabaddan. Sidaan horeyba kuugu sheegnayba waa wadar ahaan 13 la doortay. Waxaa jira mashaariic badan oo aad u xiiso badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Kaam Ganacsiyeed Cusub oo loogu talagalay Aasaasayaasha Apple Apple iyo Soosaarayaasha